Kufe uthisa esikhungweni sokumaka - Ilanga News
Home Izindaba Kufe uthisa esikhungweni sokumaka
Kufe uthisa esikhungweni sokumaka
Kugxekwa uMnyango wezeMfundo
UNGQONGQOSHE wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mshengu
KUSOLWE uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal ngobudedengu kushona uthisha esikhungweni sokumaka amaphepha kamatikuletsheni eMtshezi ngezintathakusa zangeSonto, kusolwa iCovid-19. Ngokuthola kwe-LANGA, lo thisha ufike esikhungweni ekhwehlela kodwa ethi akanalutho.
UNobhala weSadtu KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza, ugxeke kakhulu umnyango wathi ubebudedengu kakhulu kulolu daba.
“Kwezinye izifundazwe njenge-Gauteng ne-Eastern Cape, bebehlolwa othisha ngaphambi kokuvunyelwa ukungena ezikhungweni beyomaka. KwaZulu-Natal kaluzange lwenziwe lolo hlelo. Yingakho kwezinye izifundazwe kukhona abahoxile ukuyomaka ngoba besekutholakale ukuthi kukhona abaneCovid-19,” kusho uNkz Caluza.
Uthi emuva kwalesi sigameko sokushona kwalo thisha, sebethole ukuthi kukhona othisha abahaqekile yiCoronavirus. Uveze nokuthi izinto eziningi kazenzeki ngendlela ezikhungweni zokumaka. Uthe ziningi izikhalo abazitholayo kothisha bekhala ngokumbondelana ndawonye ezindaweni zokulala.
“Ukuqhelelana yinto engenzeki nhlobo ezikhungweni eziningi. Ayophela nini amasonto amabili othisha besesimeni esibucayi njengalesi ezikhungweni zokumaka?
“Siyazama ukuxoxa nomnyango kodwa-ke bakhona othisha esibasolayo kule nto abangazange bawutshele umnyango ukuthi bazodinga izindawo zokulala ngoba ngokujwayelekile kweminye iminyaka bayazihlelela balale ngaphandle uma bengafuni ukulala ezikhungweni,” kusho uNkz Caluza.
Uveze ukuthi kumele umnyango ubahlole othisha. Uthe e-Eastern Cape bawu-174 okwamanje othisha abahoxile ekumakeni ngenxa yokuthi batholwe beneCovid-19. UMengameli we-Educators Union of South Africa (EUSA), uMnu Scelo Bhengu, uthe akuqali manje ukuthi umnyango wezemfundo unikele ngempilo zothisha. Uthe basezinhlelweni zokuvala zonke izikhungo okumakelwa kuzona ezinezinkinga.
“Okwamanje sifuna ukuthola kabanzi emnyangweni ukuthi uthisha ufike nayo yini iCovid-19. Uma kunjalo, kuzomele sichazelwe ukuthi ungene kanjani ngaphakathi.
“Uma eyithole esikhungweni, ngabe akusibona yini ubudedengu bomnyango ngoba bewazi kahle ukuthi kuzomakwa kumele ngabe zonke izinto zihlelekile. Umnyango sizowubeka icala lokuzama ukubulala ngoba yimpilo yabantu le,” kusho uMnu Bhengu.
UNobhala weNatu, uNkk Cynthia Barnes, uthe bangaphezulu kuka-1 700 othisha asebeshonile ngenxa yeCovid-19, kuyathusa okwenziwa wuMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal.
“Umnyango unobudedengu, kawuzihleli izinto kusenesikhathi esanele. Yiwona ngqo obulala othisha. Ngaphambi kokuba kuqalwe ukumakwa kwamaphepha, sasivumelene nawo ukuthi othisha kumele badlele ezitsheni ezilahlwayo kodwa esikhungweni esiKwaDlangezwa (eMpangeni), bebephakelwa emapuletini okuyinto esasithe kasiyifuni.
“Bekubhuduzelwa ingalandelwa imigomo yokuzivikela,” kusho uNkk Barnes. Uthi kusukela kusasa ngoLwesibili bazobe behlola izikhungo ngoba okuningi kabakwazanga ukukwenza ngenxa yefu elimnyama elehlele iNatu kudlula emhlabeni uMnu Allen Thompson obengumengameli wayo.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe basiqaphe kakhulu isimo kuzo zonke izikhungo okumakelwa kuzona.
“Imigomo yezokuphepha siyacophelela ukuthi iyalandelwa kakhulu. Okwamanje sisazolinda kodokotela ekutheni basichazele ngembangela yokushona kukathisha,” kusho uMnu Mthethwa. Uthi inselelo ekhona wukuthi kunothisha abakhetha ukudla okuthile.
Previous articleUyabalisa “ngokudliwa kwefa lomyeni wakhe”
Next articleOwoZalo kuthiwa wesule isigubhukane